Home News Rag Muqdisho dhac ka geeysanaayay oo Gacanta Lagu dhigay!!
Rag Muqdisho dhac ka geeysanaayay oo Gacanta Lagu dhigay!!
Ciidamada Ammaanka degmada Hodon ee gobolka Banaadir ayaa gacanta ku dhigay Koox Burcad ah oo dadka Shacabka ku dhibaateynaayay Xaafaddaha degmada Hodon.
Ciidamada Booliska oo howlgal ka waday degmada Hodon ayaa lagu soo wargeliyay Koox hubeysan oo Mooto wadatay, kuwaasoo Ardayda Jaamacaddaha taleefanada ka qaadanaayay.
Gudoomiyaha degmada Hodon ayaa sheegay in kooxdaan Sharciga la Marsiin doono.
“Hay’adaha Amniga Degmada Hodan oo Gacanta ku dhigay Rag mootooyin watay oo dhac u geeysanayay arday kasoo baxday Jaamacad, ciidanka roonadada ayaa ka dul dhacay tuugadoo falkaas foosha xun ku guda jira” ayuu yiri Gudoomiyaha Hodon Cantoobo.